အရမ်းလွမ်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး …. – Shinyoon
သိပ်ချစ်ခဲ့တာပေါ့ မဟုတ်ပဲ ခုချိန်ထိကို ချစ်နေမိသေးတာ … သူပြုံးနေတာလေးကအစ သူ ပစ်ထားခဲ့ဖူးတာအဆုံး တစ်စိ်ုက်မတ်မတ်ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးပဲလေ … ခုလဲ အဝေးကြီးကနေ ဆက်ပြီး ချစ်နေမိဦးမှာပါပဲ … ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အနောက်မှာ ဘယ်တော့မှ ဆုံနိုင်အောင် ကြိုးစားတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်မိအောင်ပဲ ကြိုးစားနေမိတော့မှာပါ …
ချစ်ပေမယ့် ပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့ဘဝတွေ တကယ်ရှိပါလားဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှပဲ ယုံလာရတယ် … အရင်ကဆို သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာ အချစ်သာ ရှိရင် လူနှစ်ယောက် ပေါင်းစပ်ဖို့ လုံလောက်ပြီဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေးပဲ တွေးခဲ့မိတာ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝတွေမှာတော့ အခြေအနေတွေ မတူရင်တောင် စိတ်ဓာတ်တွေ တူဖို့လိုသေးတယ် .. စရိုက် … ပြီးတော့ လမ်းတွေပေါ့ …
မတူတဲ့အရာတွေကို ညှိယူလို့ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ တကယ်တမ်းကျတော့ မလွယ်ကူလှဘူး နားလည်ပေးရင်တောင် အမြဲတမ်းနားလည်ပေးနေရတဲ့ကိုယ့်မှာ ပင်ပန်းတယ် နေရာတကာ အလျော့ပေးနေရတဲ့ ကိုယ်ဟာတဖြေးဖြေး အဖိုးမတန်တော့သလို သိမ်ငယ်လာရတယ် တကယ်သာချစ်ရင် နားလည်ပေးရမှာပေါ့တဲ့ သိ်ပ်ချစ်တာပေါ့ အချစ်တွေတော့ အရင်လိုပဲ နည်းနည်းလေးမှ မလျှော့ခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့်လေ… သူ့အနားမှာ နေရတာ ကျွန်မ မပျော်တော့ဘူး ပြီးတော့ မတူညီတာတွေအများရှိတဲ့ ဘဝနှစ်ခုဟာ တကယ်လက်တွေ့တွေမှာ ပေါင်းစပ်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူဘူးလေ … အဝေးကနေပဲ ဆက်ချစ်ဖို့ကိုပဲ ရွေးပါတယ် ….
လွမ်းတယ် … မပြောပြဖြစ်တော့ဘူး …. သတိရတယ် … ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး … သိပ်ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်တော့ဘူး … ပြန်မလိုချင်တာကလွဲရင် အချစ်တွေကတော့ အရင်လိုပါပဲ ။
အရမ္းလြမ္းတယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မပတ္သက္ေတာ့ဘူး ….
သိပ္ခ်စ္ခဲ့တာေပါ့ မဟုတ္ပဲ ခုခ်ိန္ထိကို ခ်စ္ေနမိေသးတာ … သူျပံဳးေနတာေလးကအစ သူ ပစ္ထားခဲ့ဖူးတာအဆံုး တစ္စို္က္မတ္မတ္ကိုခ်စ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေကာင္မေလးပဲေလ … ခုလဲ အေ၀းၾကီးကေန ဆက္ျပီး ခ်စ္ေနမိဦးမွာပါပဲ … ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီခ်စ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အေနာက္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္သြယ္မိေအာင္ပဲ ၾကိဳးစားေနမိေတာ့မွာပါ …
ခ်စ္ေပမယ့္ ေပါင္းစပ္လုိ့မရတဲ့ဘ၀ေတြ တကယ္ရွိပါလားဆုိတာ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳမွပဲ ယံုလာရတယ္ … အရင္္ကဆုိ သိပ္စိတ္္ကူးယဥ္ဆန္တာ အခ်စ္္သာ ရွိရင္ လူနွစ္ေယာက္ ေပါင္းစပ္ဖို့ လံုေလာက္ျပီဆုိျပီး လြယ္လြယ္ေလးပဲ ေတြးခဲ့မိတာ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀ေတြမွာေတာ့ အေျခအေနေတြ မတူရင္ေတာင္ စိတ္ဓာတ္ေတြ တူဖို့လိုေသးတယ္ .. စရိုက္ … ျပီးေတာ့ လမ္းေတြေပါ့ …
မတူတဲ့အရာေတြကို ညွိယူလုိ့ရမယ္လုိ့ထင္ခဲ့တာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မလြယ္ကူလွဘူး နားလည္ေပးရင္ေတာင္ အျမဲတမ္းနားလည္ေပးေနရတဲ့ကိုယ့္မွာ ပင္ပန္းတယ္ ေနရာတကာ အေလ်ာ့ေပးေနရတဲ့ ကိုယ္ဟာတေျဖးေျဖး အဖိုးမတန္ေတာ့သလုိ သိမ္ငယ္လာရတယ္ တကယ္သာခ်စ္ရင္ နားလည္ေပးရမွာေပါ့တဲ့ သိ္ပ္ခ်စ္တာေပါ့ အခ်စ္ေတြေတာ့ အရင္လုိပဲ နည္းနည္းေလးမွ မေလွ်ာ့ခဲ့ဘူး
လြမ္းတယ္ … မေျပာျပျဖစ္ေတာ့ဘူး …. သတိရတယ္ … ဘယ္ေတာ့မွ မပတ္သက္ေတာ့ဘူး … သိပ္ခ်စ္တယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္သြယ္ေတာ့ဘူး … ျပန္မလုိခ်င္တာကလြဲရင္ အခ်စ္ေတြကေတာ့ အရင္လိုပါပဲ ။
အစကောင်းခဲပေမယ့် အဆုံးသတ်တွေဟာ နာကျင်စရာ …